Madaxa Shirkada Coocaka koola qeebt London oo geeriyoday – Balcad.com Teyteyleey
Madaxa Shirkada Coocaka koola qeebt London oo geeriyoday
By Abdallah Hassan	 On Oct 3, 2017
shirkada coocka koola ayaa waxaa ay tacsi u direysaa geerdia ku timid madaxa shirkada kooko koolo xarunted UK oo si lama filaan ah u geeriyooday. warbixin kasoo baxaday xafiiska kooko koola ayaa xaqiijsay dhimashada Dimitiris lois kaa oo geeriyooday 2 ocber 2017
Dimitiri waxaa uu shirkada ksuoo biiray sandka 2007 waxaa uu so qabtay madaxa hoowl maalmeedka shirkada, 2009 waxaa uu dalacay madaxa sare shirekada 2011 waxaa u noqday madaxguud shirkada qeeybtaa london. inta howshiisa shqo kusoo jiray waxaa lagu amanay howlkarnimo iyo firfircooni dheeri ah
si kumeel gaar ah hoowsha waxaa u sii wadidoono madaxa maliyada shirkada qeeybta London Michalis Imellos kaa oo haayndoon inta lagasoo doranayao madax cusub oo bedela Dimitiri.
shirkada kooko koola ayaa soo saarta sanadkast 50 milyaardi oo dhalooyin cabitaan kooko kolo u badan iyo cabitaana kale duwan. warbxin sandeedka dhaale ugu dambeey waxaa ay aheed 5.6% koriinsho faa’iido 3.2 milyaardi sandkii hore 2.84 milyaardi
Dimitir Lois ayaa waxaa qaatay fasax 4 bilood sababo caafimaad awgeeda waxaana uu wayadan la tacalaye xanuun heeyste kaa loo malyenayo in uu ugu dambeyntii u geeriyooday
The post Madaxa Shirkada Coocaka koola qeebt London oo geeriyoday appeared first on Ilwareed Online.
Madaxweyne Faramaajo oo Balan Qaad u Sameeyay Sheekh Cabdulaahi Sulfa
Somaliland oo Jawaab Adag ka soo bixisay Xeerka Isgaadhsiinta Ee uu Saxeexay Farmaajo:-Daawo